China iimbasa Basketball mveliso kunye nabenzi | UKumkani
Bhiyozela uloyiso kwinkundla yebhasikithi ngembasa evela eQonga! Sinikezela ngeendondo ezahlukeneyo kwiindlela ezahlukeneyo, ubukhulu kunye nemibala, zonke zinokuzenzekelayo. Imbasa nganye iza nokukhethwa okukhulu kweeribhoni eziqhotyoshelweyo kwaye, ukongeza okongezelelweyo, ukukrolwa komntu okwenziwe ngasemva. Ngeembasa ezikumgangatho ophakamileyo ngamaxabiso amnandi kangako, ukuhanjiswa okukhawulezileyo okuqinisekileyo kunye nolwaneliseko lwabathengi oluyi-100%, yinto ebambekayo!
Iimbasa ezintsha zebasketball ngoku zikhona kwimizi-mveliso yethu yeenyawo ezingama-50,000. Inqaku le-slam dunk ekumgangatho ophezulu, kwiindebe zebhasikithi ezifikelelekayo ezivela eKingtai! Khetha kwiintlobo ngeentlobo zeendebe zebhasikithi, zonke ziza nokukrola simahla kwaye kungasikelwanga mda. Ezi ndebe zebhasikithi ezinomtsalane nezifikelelekayo zilungele ukuhlonipha iqela lakho ngexesha elilwelwe nzima okanye ukuqonda impumelelo ekhethekileyo yabadlali bakho.
Ukukhetha kwethu kunye namaxabiso kuzo zonke iiMedical Basketball zenza oku kube yiSLAM DUNK! Ngaba nokuzithemba okongeziweyo kokujongana nomenzi weembasa owaziwayo kunye namawaka wabathengi abonelisekileyo! Thenga ukhetho lwethu olukhulu lweeMedali zeBhola yeBhola yeBhasikithi kunye neethegi zeBhola yeBhola yeBhola ekhatywayo apha ngezantsi. Khetha indondo engezantsi kwaye ungalibali ukujonga izaphulelo zeembasa zebhasikithi ze-basketball ezidweliswe phantsi kwesithombe semedali! Sikwaphethe ezinye iindidi ezahlukeneyo zeMidlalo yeBhola yeBhola ekhatywayo kunye neeNdebe.
Iimbasa zebhasikithi esemgangathweni, iimbasa kunye namabhaso esiko afumanekayo ngokuthumela kwangoko naphi na eMelika! I-EDCO izinikele ekunikezeleni ezona ndebe zibalaseleyo ze-basketball ukuqaphela kunye nenkuthazo yabadlali, abaqeqeshi kunye namavolontiya. Uyilo lwethu lokutsala amehlo luveliswa kwezona zixhobo zibalaseleyo kwaye sihambisa umgangatho ngelixa sihlala kuhlahlo-lwabiwo mali! Ivenkile ngoku kwaye ufumane amava enkonzo ekumgangatho wehlabathi, ukuhanjiswa okukhawulezileyo kunye nokonga amaxabiso kuyo yonke iodolo.
Egqithileyo IIMBALI ZEBHAYIBHILE
Okulandelayo: IIMBALI ZOKUPHA